चौरजहारीमा कुखुराको चल्ला वितरण – उजेली न्यूज
चौरजहारीमा कुखुराको चल्ला वितरण
प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०७८, शनिबार २०:१५
मुसिकोट । चौरजहारी नगरपालिकाले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम अन्तरगत पोषण अवस्था सुधारका लागि हजार दिनका घरपरिवारलाई ८ हप्ते उन्‍नत कुखुराको चल्ला वितरण गरिएको छ ।
चौरजहारी नगरपालिका वडा नं १०, ११, १२, १३ र १४ मा रहेका हजार दिन तथा बिपन्‍न परिवार अन्‍तरगत सुनौलो हजार दिनका घरपरिवार छनौट गरि प्रति परिवार ५ वटाका दरले १ सय ३० घर परिवारलाई ११ सय ५० र २० नमुना कृषक छनौट गरि प्रति परिवार १० का दरले २०० गरि कुल १३ सय ५० वटा चल्ला आज शनिबार वितरण गरिएको छ ।
महिला तथा वालवालीकाको पोषण स्थितिमा सुधार गर्ने उद्देश्यले संघिय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय अन्तर्गत बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको रु. २ लाख ७७ हजार ७ सय ७५ आर्थिक सहयोग तथा चौरजहारी नगरपालिका बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको रु. ८० हजार विनियोजित रकमबाट कुखुराको चल्ला खरिद गरि उक्त घरपरिवारलाई वितरण गरेको हो ।
Previous: राप्तीसोनारीमा सर्वदलीय बैठक– कोरोना नियन्त्रणबारे छलफल
Next: काठमाडौं महानगरद्वारा त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई १० भेन्टिलेटर हस्तान्तरण